Maxaa Tiknoolajiyaddu Xasaasi ugu noqonaysaa Guusha Makhaayadaha | Martech Zone
Waa maxay sababta Tiknoolajiyaddu ay muhiim ugu tahay guusha maqaayada
Talaado, September 29, 2015 Axad, Sebtembar 27, 2015 Douglas Karr
Waxaan haynaa Podcast la yaab leh oo dhowaan lagu soo daabici doono Shel Israel oo ku saabsan buugiisa, Deeqsinimo dilaa ah. Mid ka mid ah mowduucyada igu dhuftay wadahadalka ayaa ahaa intee in le'eg tiknoolajiyada la hirgeliyay si loo kordhiyo wax soo saarka iyo saxnaanta macaamiisha dhab ahaantii kaliya xakamaynta macaamilka gacmaha macaamilka.
Malaha caqabad ka weyni ma jiro inaad maamusho makhaayad guuleysata maalmahan. Inta udhaxeysa kharashyada tamarta, wareejinta shaqaalaha, qawaaniinta, iyo hal milyan oo waxyaabo kale oo caqabad ku noqon kara makhaayad - hadda waxaan awood u siinay qof kasta oo ilaaliye ah inuu dib u eego maqaayada qadka. Ma dhahayo taasi waa wax xun - laakiin waaya aragnimada makhaayaddu kama ahan wax mucjiso ah oo gebi ahaanba wacan. Haddii ay tahay makhaayad weyn, dadku way ka caban doonaan sugitaanka iyo adeegga. Hadday tahay cunto layaableh, waxay u badan tahay inay qaadatay waqti aad u dheer in aad miiskaaga aaddo. Haddii ay tahay habeen aan caadi ahayn mashquul, shaqaaluhu waxay noqon karaan kuwo gaaban oo aan feejignaan lahayn.
Halkee teknolojiyaddu waxay caawineysaa makhaayadaha waa iyadoo awood loo siinayo macaamiisha inay mas'uul ka noqdaan. Waa kuwan 9 tiknoolajiyada kala duwan ee aan si fudud u caawinaynin - laakiin waxay muhiim u yihiin khibradda makhaayadda:
Warbaahinta bulshada - halkii aad ka sugi lahayd in la jeexjeexo Yelp, bixinta bogga warbaahinta bulshada oo aad ka furan karto wadahadal macaamiisha oo aad ku sii wado inay soo noqdaan waa ganacsi weyn.
website - kudar liiskaaga, khariidad tilmaamaha, saacadaha, lambarka taleefanka… ama xitaa fiidiyoow toos ah khadka tooska ah si macaamiisha ay u helaan dhammaan gargaarka ay u baahan yihiin.
Goobaha Dib u eegista - ka dhig xogtaada mid cusub oo ka jawaab celcelinta ku saabsan goobaha dib u eegista.
blog - inta badan maqaaxiyayaashu waa ku weyn yihiin bulshada dhexdeeda, iyagoo ka caawiya lacag uruurinta ama wax ka qabashada dibadaha. Dadku ha ogaadaan waxa wanaagsan ee aad ku sameyneyso baloog!
Wi-fi - ka farxi dhalinyarada isla markaana yaree wixii u muuqda sugitaan dheer adoo u oggolaanaya macaamiisha inay internetka galaan. Nidaamyada qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad soo qabato xogta diiwaangelinta kuwa isticmaalaya wi-fi-gaaga si aad ugu hesho liiska emaylkaaga.
Boos celinta khadka tooska ah - weligaa is muuji oo magacaagu kuma jiro liiska boos celinta? Kudar boos celin khadka tooska ah si dadka waawayn loogu xaqiijiyo inay kujiraan nidaamka ayna ogaadaan goorta la imaanayo.
Dalbashada mobilada - horumarka dhanka teknolojiyadda ayaa suuragal ka dhigaya bixinta internetka, qaadista, iyo xitaa amarrada miiska in lagu qaado aaladda moobaylka. Amarada uu bixiyo macaamilku had iyo jeer waa sax!
Kuuboonada Dijital ah - Koodhadhka SMS-ka iyo farriimaha qoraalka ah, rasiidhada emaylka iyo barnaamijyada daacadnimada waxay ilaaliyaan macaamiisha inay soo noqdaan.
Is-Baadhitaan - mar dambe sugin jeegga. Kordhinta kiniin ah rasiidhada iimaylka ah ha u oggolaadaan dadka inay lacag bixiyaan oo ay la baxaan iyadoo ay sii yaraanayaan horay iyo gadaalba shaqaalahaaga.
Macaamiisha makhaayadaha waxay jecel yihiin tikniyoolajiyadda maxaa yeelay waxay u dhigmayaan adeegga dhakhsaha badan iyo ugu dambeyntiina, waayo-aragnimo cunno fiican. Waxay raadinayaan bartaada, haddii aad leedahay ama aanad haysan wi-fi, boos celin, iyo dalab moobiil. Waxay akhriyaan dib u eegista waxayna hubinayaan kanaalladaaga warbaahinta bulshada. Miyaad ku guuleysanaysaa iyaga oo tiknoolajiyad ku jira mise waxaad ku luminaysaa tartan?
Tags: kuuboonada dhijitaalka ahdalbashada taleefanka gacantabarnaamijyada makhaayadahabaloogyada makhaayadahamakhaayada dalbashada mobiladamakhaayad dalban onlinedib u eegista makhaayadahamakhaayada warbaahinta bulshadateknoolojiyadda makhaayaddabogga maqaayadamakhaayada wi-fisms kuuboonadamiiska lacag bixintaboos celinta miiska
Faa'iidooyinka Isticmaalka Barta Kiniiniga ee Nidaamyada Iibinta ee Bakhaarka ku jira
Oktoobar 6, 2015 at 1:52 PM
Faahfaahin weyn. Waxaan la shaqeeyaa xawaaraha 'REVTECH Accelerator' ee ku yaal Dallas oo ku takhasusay keenista hal-abuurnimo suuqyada maqaayadaha, Tafaariiqda & Soo-dhawaynta. Waxaan aragnaa fursad aad u ballaaran oo bilowga ah oo diiradda saaraya isdhexgalka macaamiisha sii kordhaya. Waqtiyada xiisaha leh. Waad ku mahadsantahay qoraalkaaga.
Oktoobar 6, 2015 at 11:24 PM
Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad wax u gaadho! Taasi waa sababta ay shaqadan u qabteen!
Nov 28, 2015 at 1: 30 AM
Waxaan ku sameyneynaa barnaamijyada moobiilka magaalooyinka ugu caansan ee dalxiiska - Miami, iyo milkiilayaasha makhaayadaha ayaa gabi ahaanba diiradda saaraya iibinta barnaamijka ee iibiyayaasha sida Eat24 iyo Postmates. Milkiilayaasha qaar si kastaba ha ahaatee waxay door bidaan inay dhisaan barnaamijyadooda, maxaa yeelay taasi waxay lacag ku keydisaa% komishanka muddo dheer.